DOORASHOOYINKA MARAYKANKA IYO QAABKA LOO DOORTO MADAXWEYNAHA: W/Q: Eng. Xuseen Adan Cige (Deyr)”Akhri” | 18 May News
DOORASHOOYINKA MARAYKANKA IYO QAABKA LOO DOORTO MADAXWEYNAHA: W/Q: Eng. Xuseen Adan Cige (Deyr)”Akhri”
DOORASHOOYINKA MARAYKANKA IYO QAABKA LOO DOORTO MADAXWEYNAHA:
W/Q: Eng. Xuseen Adan Cige (Deyr)
1. Yaa doorta M/weynaha Maraykanka? Qaabkeese loo doortaa?
2. Sidee Gobollada loogu qaybiyaa tirada “DOORTAYAASHA” “ELECTORS” M/weynaha Maraykanka?
Guud ahaanba gobollada dalka Maraykanka oo dhan waxa jira 538 qof oo la yidhaahdo “DOORTAYAAL ama ELECTORS”, kuwaasoo matalaya ama ka wakiil ah Musharaxa Xisbigiisa ee dhammaanba Gobollada Maraykanka. Dabadeedna 538 qof oo loo yaqaano “GOLAHA DOORTAYAASHA” ama “ELECTORAL COLLEGE”, iyagoo ka wakiil ah dadka ku nool gobolkooda iyo rabitaankooda, ayaa waxay cod gacan taag ah ugu codeeyaan musharaxa noqon doona Madaxweynaha. Musharaxa hela 270 cod ayaa dabadeed noqda M/weynaha Maraykanka ee afarta sano ee soo socda, waxana uu xilka la wareegaa oo la dhaariyaa 20-ka January.
Waxa xusid mudan in
a) Qaabka ay u shaxaysan yihiin Degmo Doorashooyinka gobolkaasi ee laga soo doorto mudaneyaasha Kongaraska,
c) Inta mudane ee uu gobolkaasi ku leeyahay Goleyaasha Sharci Dejinta ee heer Fadaraal, sida Golaha Wakiilada oo lagu daray laba cod oo ah Aqalka Sare ama Senate-ka, tiradan labada cod ah waxa ka siman dhammaanba Gobollada dalka oo dhan, waana tirada mudaneyaasha ee uu Gobol walba ku leeyahay Aqalka Senate-ka.
3. Qaabkee ayaa loo soo xulaa ama loo magacaabaa “DOORTAYAASHA” “ELECTORS” M/weynaha Maraykanka?
A. Doorashada ka hor, isla sanadkaa ay Doorashadu dhacayso, ayaa Xisbiyadu waxay Shir Weynahooda (Party Convention) ku doortaan DOORTAYAASHA Madaxweynaha ee Xisbigooda;
B. Qaabka labaad ee ay Xisbiyadu u doortaan “DOORTAYAASHA-ELECTORS” Madaxweynaha waxa u codeeya oo doorta Golaha Dhexe ee Xisbiga.
4. Sidee ayaa Musharaxiinta loogu qaybiyaa Tirada Codadka ee Gobollada Dalka?
5. Waa Maxay sababta ay Maraykanku u doorteen nidaamka “GOLAHA DOORTAYAASHA ama ELECTORAL COLLEGE”?
Dawladnimada Maraykanku waxay u dhisan tahay qaabab dhawr ah oo isku dhex jira oo hadana leh wada shaqayn iyo is-dheelli-tirba. Nidaamka Dawladnimo ee dalka Maraykanka waxa ka mid ah: nidaam ah Dawlad-goboleedyo federaal ah (Federation), nidaam Xukuumad Madaxtooyo ah (Presidential system), nidaam Dimuqraadiyadeed oo ah liberal (Liberal democracy), nidaam ah Jam. Federaal ah
Haddaba, markii la aasaasay Dawladnimada Maraykanka, xisbiyada Siyaasadda waxa laga qabay shiki weyn, suurto galna ma ahayn in ay Xisbiyadu ay sameeyaan olole doorasho, may jirin isgaadhsiintan casriga ah, Gobollada Maraykanka badankooduna waxay aad ugu adkaayeen Xuquuqdooda aasaasiga ah ee dawlad-gobolnimo, sidoo kalena waxa si weyn looga cabsi qabay doorasho Madaxweyne oo ku salaysan codka tooska ah ee Dadweynaha (popular vote).
� In ay Madaxweynaha doortaan Kongeresku; sababtoo ah waxay halis ku tahay kala xadaynta Awoodaha Dawladnimada;
� In ay guusha Madaxweynuhu ku salaysnaato codka tooska ah ee Dadweynaha(popular vote); sababta oo ah waxay keeni kartaa in Gobollada waaweyn ee dadkoodu badan yihiin ay si toos ah u dooran doonaan Murashaxa Gobolkooda, sidaana ay ku muquunin doonaa Gobollada yar yar.
6. Haddaba waa maxay faa’iidada nidaamka “Golaha Doortayaasha ama Electoral College”?
• Qoraa iyo Siyaasi Madaxbanaan;